Maraykanka, 29 January 2017
Axad 29 January 2017
Garsoore si KMG u Joojisay Amarka Trump ee Qaxootiga
Maxkamad federaali ah ayaa soo faragalisay amarkii madaxweyne Donald Trump ee ku saabsanaa hakinta dadka muhaajiriinta ah ee imanaya Maraykanka ee u dhashay toddoba waddan iyo qaar ka mida dadka haysta degenaanshaha rasmiga ah ee dalalkaas u dhashay.
Wareegtooyinka Trump ee Qaxootiga
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixey labo wareegto oo uu ugu talo galey in uu ku adkeeyo amniga dalka Mareykanka. Mid ka mid ah ayaa diidaya in qoxooti reer Suuriya ahi uu yimaaddo dalkan, waqti aan xadidneyn.
Dibadbax ka Socda Washington DC
Kumanaan qof oo ah dadka u dhaqdhaqaaqa in haweenku aysan iska soo ridin ilmaha ayaa ka qeyb galaya dibadbax loogu magac daray “Dibadbaxa taageeridda Nolosha” oo ka dhacaya magaalada Washington DC.
Trump oo Canshuurta Ku Kordhinaya Mexico
Aqalka Cad ee looga arrimiyo dalkan Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu heysto ikhtiyaarro badan oo ku saabsan sida ugu haboon ee ay Mexico u bixi karto derbiga uu rabo inuu ka dhiso xadka uu Mareykanka la wadaago dalka Mexico.
Trump oo Amray Darbi Laga Dhiso Xuduudda Mexico
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii amray in darbi laga dhiso xuduudda Mareykanka ee dhinaca Koonfurta ee uu la wadaago dalka Mexico, si loo joojiyo dadka sida sharci darrada ah dalka usoo galaya.
Mattis oo Booqanaya Japan iyo Korea-da Koonfureed
Xoghayaha cusub ee gaashaandhigga Mareykanka James Mattis ayaa noqonaya qofkii ugu horreeyey ee xil sare ka haya maamulka madaxweyne Donald Trump ee safar dibedda ah u baxa.
Trump oo Soo Saaraya Amar ka Dhan Ah Qaxootiga
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa in maanta oo arbaco ah uu amar ku bixiyo in la dhiso darbi u dhaxeeya Mareykanka iyo dalka Mexico ee dhinaca Koonfurta uu xuduud kala wadaago.
Dad Soomaali ah oo Laga Masaafuriyey Mareykanka
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in 90 qof oo Soomaali ah maanta laga dejiyey garoonka diyaaradaha Aadan Cadde kadib markii laga masaafuriyey dalka Mareykanka.
Madaxweyne Trump oo ka Baxay Heshiiska TPP
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Isniintii ka saaray dalka Mareykanka heshiiska ganacsiga dalalka Pacific-ga, kaasi oo ay bahwadaag ku yihiin 12 waddan oo uu Mareykanku ka mid ahaa.
Madaxweyne Trump oo Maxkamad Lala Korayo
Donald Trump ayaa madaxweyne ah kaliya maalmo kooban, hase yeeshee koox isha ku haysa anshaxa ayaa diyaar u ah inay diiwaan geliso dacwad ka dhan ah, ayada oo tuhmeysa inuu jebiyey qodob ka mid ah dastuurka.
Soomaalida Maraykanka oo si Firfrcoon uga Qaybqaadanaya Siyaasadda
Natiijada Doorashadii Maraykanka ayaa dhalisay dadaal dheeraad ah oo ay muujinayaan dadka laga tirada badanyahay ee dalkan Maraykanka, oo ku addaan siday kaalin firfircoon uga qaadan lahayeen hannaanka dimuqraadiyadda
Boqolaal Kun oo Haween Ah oo ku Banaanbaxay Washington
Boqolaal kun oo qof oo u badan haween ayaa maanta ku bannaanabaxay fagaaraha National Mall ee Washington oo kasoo horjeeda Aqalka congress-ka oo shalay lagu dhaariyey madaxweynaha cusub ee Maraykanka Donald Trump.